Ahlu-sunna Oo Baaq u Dirtay Puntland Iyo Somaliland – Goobjoog News
Maamulka Ahlu-sunna Waljameeca ee gobalada Dhexe ayaa ugu baaqay maamulka Puntland iyo Somaliland in ay sii xoojiyaan dadaallada ay kusoo dhaweynaa shacabka Soomaaliyeed ee kasoo cararaya dagaallada ka socda Yemen.
Gudoomiyaha Seddaxda gole ee Ahlu-sunna Sheekh Ibraahim Xasan Guureeye ayaa u sheegay Goobjoog News, in maanta ay tahay maalintii ay shacabka Soomaaliyeed isku gargaari lahaayeen, loogana baahan yahay maamulada Puntland iyo Somaliland in dadaalkooda ay xoojiyaan.
“Puntland kaalin wanaagsan bay ciyaartay Somaliland iyana waanu ka fileynaa midaasi oo kale in ay sameyso, Shacabkeena iyaga ayaa dhibban, dagaallo ayaa dushooda ku socda haloo gurmado” ayuu yiri Guureeye.
Sidoo kale gudoomiyaha Seddaxda gole ee Ahlu-sunna ayaa sheegay in iyagu ka maamul ahaan ay kaalin ka qaadan doonaan sidii loo soo dhaweyn lahaa Soomaalida Yemen.
Dalka Yemen waxaa ka socda dagallo, iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed oo u baahan u naftooda halkaasi laga soo badbaadiyo.
Waxgaradka Muqdisho Oo Ku Baaqay In Laga Fikiro Goobihii La Dejin Lahaa Soomaalida Kasoo Cararaysa Yemen